ko htike's prosaic collection: ကြည့်လည်း လုပ်ပါဦး ကိုသိန်းစိန်ရေ
ကြည့်လည်း လုပ်ပါဦး ကိုသိန်းစိန်ရေ
အခုတလော ကျော်ဆန်း တပည့်တွေနဲ့ ၄ ကိုယ်ခွဲ ရုရှားရောက် မျိုးမစစ်(အဲ) မျိုးချစ် မြန်မာ့ စစ်သည်တော်တွေက မီဒီယာကို မီဒီယာခြင်း ပြန်တိုက်မယ်လို့ ခပ်တည်တည် အသံတွေ ထွက်လာခဲ့နေတာပါပဲ။ ကဲ သူတို့ လုပ်သလို လုပ်ရတာ ဘယ်လောက် လွယ်ကူသလဲဆိုတာ သိအောင် ပြကြည့်တာပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အောက်က ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ပါစို့၊ ၁၈.၉.၂၀၀၇ မှာ ထွက်တဲ့ သတင်းစာက သတင်းဆောင်းပါးလေးပါ။
ခပ်တည်တည် ဖြီးဖြန်းနေသော သိန်းစိန်
သာသနာဖျက် သန်းရွှေက ဒီလို အရည် အချင်းရှိသူတွေနဲ့ အခု သံဃာတော်တွေ ကံဆောင်တဲ့နေရာမှာ ဖြိုခွဲဖို့ ဂျပုကြီး ကျော်ဆန်းနဲ့ ဌေးဦးတို့ကို မီဒီယာကနေ တာဝန် ပေးထားလို့ မကြာခင် ဟာသ ရသ ကောင်းကောင်းလေးတွေ သတင်းစာထဲ မြင်ကြရပါလိမ့်မည်လို့ သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါတယ်။
ကဲ ကိုသိန်းစိန်ရေ ကြည့်လည်းလုပ်ပါဦး။
Posted by ကိုထိုက် at 00:18
This photo proved that the regime is lying to the world that there are no child soldiers in Burma. The young kids under 18 were recruited by the Burmese army for its expansion. They belong to school for our country development not for war against each other.